प्रशासनकै मनोबल गिराउने गरी मुख्य सचिव नियुक्ती - सिम्रिक खबर
प्रशासनकै मनोबल गिराउने गरी मुख्य सचिव नियुक्ती
काठमाडौँ ।नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा शंकरदास वैरागी नियुक्त हुनुभएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बुधबार दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै वैरागीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रशासन क्षेत्रका मुख्य नेताको रुपमा रहने मुख्य सचिव पदमा प्रशासन सेवा क्षेत्रको ब्यक्तिलाई छोडी परराष्ट्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको हो । जुन प्रशासन सेवाको पछिल्लो इतिहाँसमै लगभग पहिलो घटना भएको कर्मचारीहरुले बताउँछन् । ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आगामी कात्तिक ७ गते अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको दुई साताअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो । मुख्यसचिवका लागि वैरागीसहित, केदारबहादुर अधिकारी, मोहनकृष्ण सापकोटा लगायत दाबेदार हुनुहुन्थ्यो । यसैविच सिधा प्रक्रियाबाट मूख्यसचिवबाट बैरागी विदा भएको खण्डमा यस पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको पालो आउने देखिन्छ । उहाँ शिक्षा क्षेत्रबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
यस सँगै प्रशासन क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने गरी गरिएको यस नियुक्तीलाई कर्मचारीले भने रुचाएका छैनन् । परराष्ट्र क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई प्रशासनमा ल्याउनुले कर्मचारीमा उत्साह नभएको देखिन्छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ । राजदूतहरुको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई कार्यकाल सकिएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाइएको थियो । उनलाई डिफ्याक्टो अर्थमन्त्रीको रुपमा पनि हेरिएको थियो । यसैविच एकै व्यक्तिलाई आधा दर्जन पदमा नियुक्ती दिन सक्ने सरकारले राम्रो काम गरि उचाई बनाएका कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा फेरी पनि नियुक्ती दिन नखोज्दा जनताले सरकारमाथि रोष प्रकट गरेका छन् ।